‘Kana ndoda bonde ndinorova mukadzi’
You are at:Home»NHAU DZEKUMATARE»‘Kana ndoda bonde ndinorova mukadzi’
VANHU vaive mudare redzimhosva vakakahadzika apo mumwe murume akati anosvika pakuzvambaradza kurova mudzimai wake kana achinge aramba kuenda naye pabonde uye dzimwe nguva anotora mari yekutengesa chikafu chemumba achinokecha pfambi.
Radia Sithole akataura mashoko aya muHarare Civil Court mushure mekunge amhan’arirwa nemudzimai wake Martha Bhera. Bhera anoudza dare kuti Sithole anomushungurudza zvakanyanyisa.
“Changamire, ndidzivirireiwo nekuti baba ava tava nemakore makumi matatu tichigara tose asi zvavanoita hazviite. Vanondirova vachitora mari mumba vachiti vanoda kunokecha pfambi uye vakadzoka kubhawa vakadhakwa vanosvikondirova, vondimanikidza kuenda navo pabonde,” anodaro. Anoti Sithole anomutuka zvinyadzi pamberi pevana. “Ndinotukwa zvinyadzi pamberi pevana, vana kuchikoro havachatombogona nekuda kwekushungurudzwa kwandinoitwa nababa vavo,” anodaro Bhera. Sithole anoti haapikisane nechikumbiro chemudzimai wake chekuti apihwe gwaro redziviriro.
“Ini handipikisane nechikumbiro chavo asi zvekutora mari yemumba ndichinokecha pfambi zvakangoitika kamwe chete. Amai ava havadi kundipa bonde saka ndichizovarova kana kuvatuka, zvinenge zvichindirwadza,” anodaro.
Mutongi Larzin Ncube akapa Bhera gwaro redziviriro.